CODEEYN: Gobolkee ugu cod badnaaday gobolladii iskugusoo baxay nus-dhamaadka tartanka maamullada? (Natiijadii codaynta?) – Gool FM
(Muqdisho) 24 Luulyo 2016 – Waxaa magaalada Muqdisho si xamaasadi ku dheehan tahay uga soconaya tartanka gobollada dalka oo ay haatan dhamaadka iskugusoo hareen xulalka Jubbaland vs Puntland oo sida la sheegayo Talaadada kala bixi doona.
Haddaba, waxaannu idiin haynaa natiijada codayntii aannu ka sameeynay nus-dhamaadkii tartanka oo ay iskugu soo hareen Banaadir oo ku hartay gacanta Jubbaland iyo Hiiraan & Sh. Dhexe oo ay shalay dubatey kooxda Puntland.
Codayntuna waxay ku saabnayd xulkii 4-dooda kasoo bixi kara ee koobka hanan kara, waxayna codayntii noqotay sidatan:
Hiiraan & Sh. Dhexe 17.37%
"Waxaa jira dad doonaya in Messi ay ku qasbaan ka tagista Barcelona" - Joan Laporta
Lyon oo albaabka ka xiratay Arsenal: Lacazette kamatagayo kooxda"